Gudiga Doorashooyinka oo fasaxay laba Kursi oo laga Xanbiyey Konfur Galbeed | dayniiile.com
Home WARKII Gudiga Doorashooyinka oo fasaxay laba Kursi oo laga Xanbiyey Konfur Galbeed
Gudiga Hirgelinta Doorashooyinka heer federaal ee (FIET) ayaa fasaxay Kuraasta kala ah Hop-103 iyo HOP-204 ee degaan doorashadooda tahay Koonfur Galbeed.
Waxaa sidoo kale guddiga sheegeen in lagu celinayo doorashada kursiga tirsigiisu yahay HOP154.
Arrintan ayaa timid ka dib markii gudoonka guddiga FEIT iyo xubno kale oo maanta booqday magaalada Baydhabo ay kulamo la qaateen madaxda Maamulka K/galbeed si xal looga gaaro khilaafkii ka dhashay saddex ka mid ah afar Xildhibaan oo guddigu dib u celiyey.
Cabdi Xiis Udan oo dhanka Maaliyadda u qaabilsan guddiga FIET ayaa xaqiijiyay in kursiga Hop154 ee ay ku soo baxday Xildhibaan Sareedo aan loo marin habkii saxda ahaa, guddiguna uu go’aan ku gaaray in dib loogu laabto kursigaas.
Maamulka K/Galbeed ayaa ooda ka qaadaya in ka badan 70 Xildhibaan oo lagu xanibay Baydhabo, lagana hor joogsaday iney qaataan shahaadada sababo la xiriira khilaafkan.
Previous articleRuushka oo la sheegay inuu adeegsanayo hubka kiimikada khatarta ah
Next articleBooliska New York oo raadinaya nin lagu tuhmayo weerar toogasho ah oo shalay ka dhacay goobta tareenada laga raaco oo ku taalla magaalada New York